बेलायतमा फैलिएको नयाँ कोरोनाभाइरस कति घातक ? के छन् विशेषता ? : डा. रवीन्द्र पाण्डे - Sawal Nepal
काठमाडाैं डा. रवीन्द्र पाण्डे २०७७ पुष १३, १७:४९
बेलायतको दक्षिणपूर्बी क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको नयाँ परिवर्तित स्वरूप देखा परेको छ । यो नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस अत्यधिक संक्रामक भएको जनाइएको छ । हाल महामारी ल्याएको कोरोना भाइरसको तुलनामा नयाँ प्रजातिको संक्रामक दर ७० % बढी देखिएको बेलायती वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । यसको मृत्युदर पहिलेको तुलनामा धेरै छ कि, उस्तै छ कि थोरै छ भन्ने बिषय अध्ययन गर्न बाँकी छ । डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको जस्ताको तस्तै :
यो महामारीबाट बच्ने प्रमुख उपाय नै जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई जीवनशैली बनाउनु हो । सहि तरिकाले अनिबार्य रुपमा मास्क लगाउने, २ मिटरको दुरी कायम गर्ने, भीडभाड नगर्ने, भेन्टिलेसन कायम गर्ने तथा हातको सफाई र अनुशाशन कायम गर्ने हो भने परिवर्तित प्रजातिबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
त्यस्तै महामारीको समयमा सामना गर्नुपर्ने कठिन परिस्थितिमा आत्मबल तथा मानसिक शक्ति प्रबल गराउनु जरुरी हुन्छ ।
थाइराइडको औषधि खानेहरुलेअत्यन्तै ध्यान दिनुपर्ने कुरा!
मोटोपन खाना छाड्दैमा घट्छ?
बाँदर किन मानव समुदाय कै वरिपरी बस्न रुचाउँछ?